My Collections!!!: **မာန (၉)မျိုး အကြောင်းသိကောင်းစရာ** Wednesday, January 16, 2013
**မာန (၉)မျိုး အကြောင်းသိကောင်းစရာ** ဥစ္စာ စည်းစိမ် ပညာ ဂုဏ်သိရ် အဆင်း အသံ ခြွေရံ စသည်အားဖြင့် အားလုံးဖြစ်စေ, တစ်ဘက်ဘက်က ဖြစ်စေ ---၁။ သူများထက် ငါသည် မြတ်၏၊ သာ၏ --- ဟု မှတ်ထင်ခြင်း = မာန်မူခြင်း = သေယျမာန်,၂။ ငါသည် သူများနှင့် တန်းတူ၏ဟု မှတ်ထင်ခြင်း = မာန်မူခြင်း = သဒိသမာန် = (ဒင်းတို့နှင့် ငါ ဘာထူးသလဲ စသည့် မာန်မျိုးတည်း။)၃။ ငါသည် သူများအောက်ကျ၏ဟု မှတ်ထင်ခြင်း = မာန်မူခြင်း = ဟီနမာန် = (ဒင်းတို့အောက်ကျလို့ကော ဘာအရေးစိုက်ရမှာလဲ စသည့် မာန်မျိုးတည်း။)ဤသို့လျှင် မာန်မာန (၃)မျိုး ရှိပေသည်။ ထိုမာန် (၃)မျိုးတို့သည် ပုဂ္ဂိုလ် (၃)မျိုးတို့၏ သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်တတ် ကြကုန်၏။ ပုဂ္ဂိုလ် (၃)မျိုးဟူသည် လောက၌ ---၁။ သေယျပုဂ္ဂိုလ် = အမြတ်စားပုဂ္ဂိုလ်၊ ၂။ သဒိသပုဂ္ဂိုလ် = သူများနှင့်တန်းတူ အလတ်စားပုဂ္ဂိုလ်၊၃။ ဟီနပုဂ္ဂိုလ် = သူများအောက် အဆင့်နိမ့်ကျသော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု (၃)မျိုး ရှိ၏။ထိုပုဂ္ဂိုလ် (၃)မျိုးတို့တွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတစ်မျိုး၏ သန္တာန်၌ မာန် (၃)မျိုးစီ ရှိကြ၏။သေယျပုဂ္ဂိုလ်၏ မာန် (၃) မျိုးသေယျပုဂ္ဂိုလ်၏ သန္တာန်၌ ---၁။ မိမိအောက် ဥစ္စာစည်းစိမ် ပညာဂုဏ်သိရ် စသည်တို့ နိမ့်ကျသူကို အာရုံပြု၍ ''ငါသည် သင်းတို့ထက် သာ၏ မြတ်၏''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း သေယျမာန်,၂။ တန်းတူသူကို အာရုံပြု၍ ''ငါသည် သင်းတို့နှင့် တူ၏ = အတူတူပဲ''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း သဒိသမာန်,၃။ မိမိထက် အရာရာတွင် သာလွန်သူ အထက်တန်းကျသူကို အာရုံယူ၍ --- ''ငါသည် သင်းတို့အောက် နိမ့် ကျ၏၊ အောက်ကျ၏ = အောက်ကျလို့ကော ဘာအရေးစိုက်စရာ ရှိသလဲ'' စသည်ဖြင့် မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း ဟီနမာန် ---ဤသို့ (၃)မျိုး ရှိပေသည်။ အလားတူပင် သဒိသပုဂ္ဂိုလ်၏ သန္တာန်၌ မာန် (၃)မျိုးပင် ရှိ၏။သဒိသပုဂ္ဂိုလ်၏ မာန် (၃) မျိုး၁။ မိမိအောက် ဥစ္စာစည်းစိမ် ပညာဂုဏ်သိရ် စသည်တို့ နိမ့်ကျသူကို အာရုံပြု၍ ''ငါသည် သင်းတို့ထက် သာ၏ မြတ်၏''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း သေယျမာန်,၂။ တန်းတူသူကို အာရုံပြု၍ ''ငါသည် သင်းတို့နှင့် တူ၏ဟု = အတူတူပဲ''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း = မာန်မူခြင်း သဒိသမာန်,၃။ မိမိထက် အရာရာတွင် သာလွန်သူ အထက်တန်းကျသူကို အာရုံယူ၍ -''ငါသည် သင်းတို့အောက် နိမ့်ကျ၏ = အောက်ကျလို့ကော ဘာအရေးစိုက်စရာ ရှိသလဲ'' --- စသည်ဖြင့် မှတ်ထင်ခြင်း = မာန်မူခြင်း ဟီနမာန်ဟု (၃)မျိုးပင် ရှိ၏။ဟီနပုဂ္ဂိုလ်၏ မာန် (၃) မျိုးဟီနပုဂ္ဂိုလ်၏ သန္တာန်၌လည်း ---၁။ မိမိအောက် ဥစ္စာစည်းစိမ် ပညာဂုဏ်သိရ် စသည်တို့ နိမ့်ကျသူကို အာရုံပြု၍ ''ငါသည် သင်းတို့ထက် သာ၏ မြတ်၏''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း သေယျမာန်,၂။ တန်းတူသူကို အာရုံပြု၍ --- ''ငါသည် သင်းတို့နှင့် တူ၏ = အတူတူပဲ''ဟု မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူခြင်း သဒိသမာန်,၃။ မိမိထက် အရာရာတွင် သာလွန်သူ အထက်တန်းကျသူကို အာရုံယူ၍ --- ''ငါသည် သင်းတို့အောက် နိမ့် ကျ၏ အောက်ကျ၏ = အောက်ကျလို့ကော ဘာအရေးစိုက်စရာရှိသလဲ'' စသည်ဖြင့် မှတ်ထင်ခြင်း မာန်မူ ခြင်း ဟီနမာန် --- ဟု (၃)မျိုးပင် ရှိ၏။ (အဘိ၊၂၊၄ဝ၄။)
ထို (၉)မျိုးတို့တွင် သေယျပုဂ္ဂိုလ်၏ သေယျမာန်မူခြင်း, သဒိသပုဂ္ဂိုလ်၏ သဒိသမာန်မူခြင်း, ဟီနပုဂ္ဂိုလ်၏ ဟီနမာန်မူခြင်းသည် ဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်း မာန်မူခြင်း = ယာထာဝမာန မည်၏။ ဤယာထာဝမာနကို အရဟတ္တမဂ်ကသာ ပယ်နိုင်၏။ မိမိနှင့် မတန်သော အခြားမာန် (၂)မျိုးစီသည် မဟုတ်မမှန်သော မာန်မူခြင်း = အယာထာဝ မာန မည်၏။ ဤအယာထာဝမာန်ကို သောတာပတ္တိမဂ်တုန်းကပင် ပယ်နိုင်ပြီ။ (အသင်သူတော်ကောင်းသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ သောတာပန်ဟု ယူဆလျှင် ဤအယာထာဝ မာန်မာနတရားများသည် မိမိ၏ သန္တာန်၌ ရှိ-မရှိ ကို ဉာဏ်ပညာစက္ခုဖြင့် စေ့စေ့ငုငု သေချာစွာ ကြည့်ရှု၍ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ မိမိ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများကို အကဲခတ်ကြည့်ပါ။) ထိုအလုံးစုံသော မာနသည် ခပ်ထောင်ထောင် ခပ်ကြွကြွ ခပ်ကြွားကြွား ခပ်မာမာနှင့် စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမြင့်မောက်ခြင်း အသာယူလိုခြင်း ထောင်လွှားခြင်း သဘောလက္ခဏာ ရှိပေသည်။ဥစ္စာချင်း ယှဉ်၍ အသာယူလိုသည့်သဘော ပညာဂုဏ်သိရ်ချင်း ယှဉ်၍ အသာယူလိုသည့်သဘော, သားချင်း, သမီးချင်း, ဇနီးချင်း, ခင်ပွန်းချင်း ယှဉ်၍ အသာယူလိုသည့်သဘော, နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် တရားချင်းပင် ယှဉ်၍ အသာယူလိုသည့်သဘောများသည် ဤမာန၏ သဘောများသာတည်း။
မာနဓာတ်ခံရှိသူသည် တံခွန်အလံကို စိုက်ထောင်၍ ထားသကဲ့သို့ အများအပေါ်၌ မောက်မော်လို၏၊ ကြွတတ် ရှိ၏၊ ရာထူးဂုဏ်သိရ် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပညာ အဆင်း ရောဂါကင်းခြင်း စသော ဂုဏ်တို့ဖြင့် သူများထက် သာနေသောအခါ --- ''သင်းတို့နှင့် တူသလား တန်သလား''ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးကာ သူတကာကို အထင်သေးတတ်၏။သူများထက်မသာဘဲ တန်းတူဖြစ်နေလျှင်လည်း မာနဓာတ်ခံ ရှိနေသူတို့မှာ --- ''သင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဘာထူးသေးလဲ၊ သူလောက်တော့ ငါလဲ ရတာပဲ''ဟု တန်းတူထားလျက် မာန်တက်တတ်ပြန်၏။ရာထူးဂုဏ်သိရ် စည်းစိမ်ဥစ္စာ စသည်တို့က အောက်တန်းကျပြန်လျှင်လည်း မာနဓာတ်ခံရှိနေသူမှာ ---''သူတို့က ငါ့ထက်သာလို့ကော ငါက ဘာအရေးစိုက်ရမှာလဲ၊ ကိုယ်ရှိမှ ကိုယ်စားရတာဘဲ၊ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာပဲ၊ ဘယ်သူ့ကို ခခယယ လုပ်နေရမှာတုန်း''ဟု အံမတုနိုင်သော်လည်း မာန်ပြုလျက်ပင် ရှိ၏။အများဖြစ်တတ်သော မာန်များ
ဇာတိမာန် --- အမျိုးဇာတ် မြင့်မြတ်သည့်အတွက် မာန်မာနတက်ခြင်းကို ''ဇာတိမာန်''ဟု ခေါ်သည်။ ယခုခေတ်၌ အတော်အတန် အမျိုးကောင်းသူတွေ ရှိပါပေသည်၊ သို့သော် မာန်တက်လောက်အောင်, ဟန်ကြီး ပန်ကြီး လုပ်လောက်အောင်, တစ်ဘက်သားကို ခြေဖဝါးအောက်က ထားလောက်အောင် အမျိုးဇာတ် မြင့်မြတ် သူကား ရှားလှပေသည်။ မဟာသွေး မဟာနွယ် မဟာမျိုး ဖြစ်၍ အမျိုးဇာတ် မြင့်မြတ်သည်ဆိုဦးတော့, ထိုအမျိုး မြင့်မြတ်သူက မာန်မာနမတက်ဘဲ စစ်မှန်သော မေတ္တာတရား, ဖြူစင်ဖြောင့်စင်းသော ကရုဏာတရားတို့ကို ရှေ့ ထားကာ ပြေပြေပြစ်ပြစ် နူးနူးညံ့ညံ့ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ညက်ညက်ညောညောနှင့် အပြောချိုကာ အရာရာတွင် လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်တတ်ပါမူကား အောက်တန်းကျသူတို့က ပိုမို၍ ချစ်ခင် ကြည်ညို လေးစားကာ မြတ်နိုး ကြမည် မဟုတ်ပါလော။
(နိဗ္ဗာနဂါမိနိပဋိပဒါ - စတုတ္ထတွဲ-5 မှ) Shared from Ko Min Aung Naing (FB)သဲကုန်းဆရာတော်ကြီးတရားနာထားတုန်းက မှတ်ထားတဲ့ မာန ၂၇ မျိုး ကိုကြုံလို့ ပြန်ရေးပြပါရစေ ... ၁) အမျိုးဇာတ်မြင့်သည်ဟုမာန်တက်ခြင်း ၂) အနွယ် မြတ်သည်ဟုမာန်တက်ခြင်း၊ ၃) ကျန်းမာသောကြောင့် ၄) ပျိုရွယ်သောကြောင့် ၅)အသက်ရှည်သောကြောင့် ၆) ၀င်ငွေကောင်းသောကြောင့် ၇) ပစ္စည်းကောင်းများကိုသာ ရတတ်လေ့ရှိသောကြောင့် ၈) လူအများက လေးစားခံ ရသောကြောင့် ၉) နေရာတကာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရသောကြောင့် ၁၀) အခြံအရံများသောကြောင့် ၁၁) ပစ္စည်းပေါများသောကြောင့် ၁၂) ရုပ်အဆင်းလှပသောကြောင့် ၁၃) အကြား အမြင် ဗဟုသုတများသောကြောင့် ၁၄) ကိစ္စများပေါ်လာလျင်ဖြေရှင်းတတ်သော ကြောင့် ၁၅) ထေရ်ကြီးဝါကြီးဖြစ်ရသော ကြောင့် ၁၆) ဆွမ်းလိုက်မစားရသောကြောင့် ၁၇) လူအထင်ကြီးခံရလေ့ရှိသောကြောင့် ၁၈) သွားလာနေထိုင်မှုတွင် ကြည်ညိုလေး စားခံရသောကြောင့် ၁၉) တန်ခိုးရှိသောကြောင့် ၂၀) အခြံအရံများသောကြောင့် ၂၁) ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းသောကြောင့် ၂၂) သမာဓိကောင်းသောကြောင့် ၂၃) လက်မှုပညာတတ်ကျွမ်းသောကြောင့် ၂၄) အရပ်မြင့်သောကြောင့် ၂၅) ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးအစား ပြေပြစ်သောကြောင့် ၂၆) ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ပြေပြစ်သောကြောင့် ၂၇) အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ခန္ဓာကို ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် မာန်တက်ခြင်း ... ဆိုပြီး မာနတရားကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းတရားတော်မှာ ဟောကြားထားပါတယ်။Shared from Shwe Mar Than (FB)
* Love to all living things *
Peaceful and Graceful Song!!!
Dhamma can be achieved everywhere!
The Moon Represents My Heart*
My Little World.......
Saunt Nay Sal . . .
Need only LOVE!
Thanks for everything ...........
You will know about me when you read my blogs! :)
Happy New Year....... :)
ရဠပါလသုတ္တန် (အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသ)
တေမိယဇာတ်တော်ကြီး၊ ခမည်းတော်နှင့် စကားဆိုခန်းမှ
နံနံပင်နဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါကုသနိုင်၊ ကာကွယ်နိုင်
Facebook Page ကိုင်သူအားလုံး ဖတ်ရန် (အထူးသတိပေးချက...
ဆရာတော် ဦးဇောတိက၏ ဒေါသ၊သောက နည်းစေရန် နည်းလမ်းများ...
**မာန (၉)မျိုး အကြောင်းသိကောင်းစရာ**
Post Type: Love
Supercharging Immune System
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မစ္ဆရိယ (၅) မျိုး
*** တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ သတိ တစ်လုံး***
ပေးကမ်းခြင်း ( ဆရာတော် ဦးဇောတိက )
မဟာစည်ဆရာတော်နှင့် ယနေ့ခေတ်ဝိပဿနာရှုနည်းများ (၁)
ဥပေက္ခာ ဘာဝနာ သဘော
Youtube မှာ ဗီဒီယိုတွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Facebook အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အထီးကျန်ဝေဒနာသက်သာနိုင...